Faa’’iidada Nashashada Wakhtiga Shaqada! | Dhaymoole News
Faa’’iidada Nashashada Wakhtiga Shaqada!
Shirkadaha Japan ayaa shaqaalaha aan ka soo bixin shaqadiisa ku khasba inuu dalbado shaqo ka tegid. Shirkadahan ayaa samaystay qolal ay ku magacaabaan Makhsinka ciqaabta, waxaana qofka shaqaalaha lagu khasbaa inuu goob saqafka qolka ah uu qabsado ka dibna laga hoos qaado miiska uu ku taagan yahay isaga oo gacmihiisa ku haysta qoriga sare ee soo saqafka. Qofka shaqaalaha ayaa marka uu muddo ku dhibaatooda codsada inuu shaqo ka tegida doonayo oo laga daayo ciqaabka.
Kuwa ugu badan waxay ku qaadaataa 10 saacadood. Dadkan ayaa aad u neceb inay shaqada ka tagaan, iyadoo hadii shirkadu erido lagu soo oogo xuquuq badan madaama aanay buuxsamin mudadii heshiiska shaqada.
Shirkadaha Japan waxa kale oo ay u ogol yihiin qofka shaqaalaha ah uu seexdo wakhtiga duhurkii si uu shaqadiisa isagoo xoog ah oo nastay dib ugu bilaabo gelinka danbe. Taasi oo keentay in qofku isagoo shaqada ku jira uu seexdo goobta shaqada iyadoon shirkaduna u arag wax dhibaato ah..